Emlandweni Wethu - Jiangsu Yongxiang umfutholuketshezi Co. Ltd
Ukukhiqizwa Team eyakhelwe
Ukuze sikhonze amakhasimende kangcono, ngo-2008, Yongxiang eyakhelwe ithimba layo ukukhiqizwa futhi isabalalise ibhizinisi izingxenye wokubacindezela futhi amasilinda akhiqize, ukucubungula, yokuthengisa and service.
Nge ukuthuthukiswa kwebhizinisi, lesi sitshalo aqashiwe ayisakwazi ukuhlangabezana ukukhiqizwa nokuphathwa izimfuno ezingemukeleki. Yongxiang eyakhelwe siqu isitshalo futhi ehhovisi isakhiwo yayo. Futhi bafakwa ukusetshenziswa ku 2011.
Ukwandisa izinga imikhiqizo, Yongxiang uthenge 1st CNC umshini centre 2015. Eminyakeni eyalandela, Equipments eziphambili abengeziwe ephethwe ukuthuthukisa amandla inkampani.
Ibeka emhlabeni phansi China Electronic Imboni, ukusebenzisa engcono yale izinzuzo zemvelo, Yongxiang wasungula uphiko Haimante Electronic Co., Ltd ku-2017.
Ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kanye ukukhiqiza, Yongxiang iqala ukusebenzisa amarobhothi ubuchwepheshe womshini. Ngemva ukulungisa iphutha futhi liyasebenza I 1st irobhothi isandla kahle esetshenziswa ekucubungululeni ukudluliswa izingxenye.